“Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo” 1 Kôr. 3:9
Ny Fanahy Masina dia tsy maintsy hery velona hampiaiky ny fahotana. Maneho amin’ny mpandaha-teny ny hasarobidin’ny sorona teo an-kazo fijaliana ny Fanahy Masina; ary rehefa entina eo anatrehan’ireo fanahy izay manoloana ny fahamarinana, dia ho babon’i Kristy ho Azy izy ireo ary miasa hanova ny toetrany Izy. Vonona ny hanasitrana ny rofintsika Izy, hampianatra sy hitarika ary hanindrimandry antsika amin’ireo hevitra avy amin’ny fahateram-baovao.
Bitika tokoa ny asa famonjem-panahy azon’ny olona atao, saingy lehibe sy goavana izany amin’ny alalan’i Kristy, rehefa feno ny Fanahy izy ireo. Ny mpampianatra amin’ny maha-olombelona azy dia tsy afaka mamaky ny fon’ny mpihaino azy; mizara ny fahasoavana ilain’ny fanahy tsirairay Jesosy. Mahafantatra ny fahaiza-manaon’ny olona Izy, ny fahalemeny sy ny heriny. Miasa ao am-pon’ny olona ny Tompo; ary ho an’ireo fanahy izay mihaino dia mety ho tsirom-pahafatesana mitarika ho amin’ny fahafatesana sy manalavitra azy ireo an’i Kristy ny mpanompo iray. Na koa, raha feno fanoloran-tena izy, olom-bavaka , tsy matoky tena fa mijery an’i Jesosy, dia mety ho tsiron’ny fiainana, manome fiainana ho an’ireo fanahy izay efa eo ambanin’ny hery mandresy lahatry ny Fanahy Masina, ary ny Tompo, ao am-pon’izy ireo, dia manomana ny lalana hidiran’ny hafatra izay nomeny ilay olona mpitondra hafatra. Tohina noho izany ny fon’ilay tsy mpino, ary handray ny hafatry ny fahamarinana izy.
“Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay”. Ny fandresen-dahatra nambolena tao am-po sy ny fahazavana noho ny fahalalana tamin’nynidiran’ny Teny tao anaty dia miara-miasa amim-pirindrana tanteraka. Manana hery manaitra ny tanjaky ny fanahy izay matory ny fahamarinana nampahafantarina ny saina. Miara-miasa amin’ny fiasan’andriamanitra eo amin’ny olombelona ny Fanahy Masina miasa ao am-po.
Naseho ahy ombieny ombieny fa tsy azo antoka ny toerana misy ny vahoakan’Andriamanitra amin’izao andro farany izao raha mitoky amin’ny olona sy manao ny nofo ho sandriny izy. Ny sabatra maherin’ny fahamarinana dia niaro azy ireo tamin’izao tontolo izao tahaka ny vato marokoroko izay mila asaina sy amboarina ary diovina ho an’ny fanorenan’ny lanitra. Tsy maintsy tefen’ireo mpaminany amin’ny fanakianana, fampitandremana, fanitsiana ary toro hevitra izy ireo, mba ho voavolavola ho tahaka ny Modelin’ny lanitra; izany no asa manokana ataon’ny Mpananatra, dia ny manova ny fo sy ny toetra, mba ho afaka hanao ny sitrapon’Andriamanitra ny olona.